A Ixesha entsha emsebenzini-Electric Skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
A Ixesha entsha emsebenzini-Electric Skateboards
Ngokuqhelekileyo, ngenxa ubungakanani kunye ubunzima skateboards zithwele kubo into. Kakhulu abasebenzi bethu eJamani-based kudala ukuba ukwazi ngayo "electro-ukushukumiseka", nto leyo yinkxalabo enkulu kwezopolitiko eJamani ngokwenene kumazwe zonke eYurophu bonke. Sikunikezayo ngempumelelo yinkulumbuso-inotshi lomthengi uncedo ukuze uhlale up kwaye abasebenza wena ukuba okanye hayi imodeli umthengi omtsha okanye enye run elide! Lonke ixesha nxiba umnqwazi, kwakunye nezinye izixhobo zokhuseleko eyamkelekileyo (umz Ethembele ummiselo yakho yobulali, usenokuba kumele kwambathe isigcina xa eqhuba. Ufuna uncedo ukwakha Rubber zombane? KOOWHEEL Drive a mountable electric drive ejika nayiphi na Rubber rhoqo ibe Rubber zombane – inside minutes. In terms of range, it goes with out saying that the bigger the range, the higher because you can be allowed to cowl spectacular distances without needing to recharge it every 10 minutes. Don’t matter in case you are looking for a brand new financial manner of transport or just need enjoyable, the Koowheel cruiser will provide you the highest quality of skating.
Koowheel Iziphumo emihle Cruiser wabudla apha ndandingasakulindelanga, ucinga ukubaluleka, nto leyo ukuhla ngaphezu kwezinye skateboards ezininzi zombane. I Koowheel nolusebenza sisebenzisa umlawuli ekude ephathwayo leyo Ukongezelela luyagwagwisa motor ukwazi ukuba brushless. Indawo, ubonelela oorhulumente lweenkobe igunya ukumisela ukuba okanye hayi ukuvumela ubuchule emizini yabo umntu othile. Koowheel ayile umgangatho prime kunye nokusebenza skateboards ngokugqithisileyo zombane kwezothutho sixeko kunye nemisebenzi zemidlalo nabalandeli. Koowheel kusinika Rubber zombanekunye ukuxabiseka nanto kunye nesiqinisekiso ukhuphiswano ngeendleko ezifikelelekayo. Mna benehlombe yintengo ngokujongana - kwihlabathi kaninzi ithanda ukuba akunjalo. Oku kwenza ukuba uphathe isidanga ibhetri, ukuze awuyifumani wena kunye Rubber engenamsebenzi zikucaphukisa. An amacandelo ebalulekileyo isixhobo Rubber sombane zezona neebhetri ukuba amnike amandla le Rubber basuka, eli lokuba ukukhawulezisa kunye elekhtrons, ibhodi engundoqo nokunyuka no kwitshaja ukuba uyazihlaziya ibhetri.
Iintlobo ezimbini ezibalulekileyo isithuthi ukuba acinge apha angaba-wheel Motors hub okanye nebhanti kwawenza abo. Zombane wethu Rubber IiKhithi ziya kunceda kwenza le nkqubo elula. Ngokuqhelekileyo, kukho skateboards zombane kunye skateboards kwi-street zombane. Ngenxa enokuba kwakukho omnye phakathi lemigubasi yam, angasisichenge kuyo kwaye uninzi elindile, abantu abaninzi akwandixelela ukuba asenini na ingxelo bekukho ukuba kukho iibhodi okunene nice kusilela. Kunjalo, emva kokuba uphuhliso ipetroli enikwe skateboards, baye bambalwa oonobangela ababebanga ukuba ezi iibhodi ngenjini ukuba wavalwa ngathi kukho: ingxolo eveliswe yi-injini kunye iinjini nepetroli ukuba ukudala ungcoliseko.
Ukusukela Usihlube kakhulu Rubber ilungileyo yombane liyaqhubeka, ukulungele ukufumana phandle? KOOWHEEL skateboards ukuxuba ubunzulu imisebenzi zemidlalo ezigqithisileyo kunye injabulo ezaziwa skateboarding athumele omnye okuhle zokubhoda amandla efumanekayo! Kanye ngoku ndiya kunityatha emagxeni, ngokoluvo lwam, i-10 skateboards omkhulu nesetyenziswa imihla yonke. Top-of--kaloliwe ngokutsha abenzi for 2018 yi Koowheel. Inikeza eqhelekileyo isantya 30km / h, top isantya 45km / h, yiya ngokukhawuleza, kwaye kukugubungela malunga-20 ukuya kuma-25 km kunye inye ibhetri. Ibhetri ngoku 20pcs18650 iiseli lithium rate High.
ixesha Post: Feb-06-2018